पुष्पामा अल्लु अर्जुनको हातको इशारा शहनाज गिलबाट कपि गरिएको थियो ? प्रमाण हेर्नुहोस् (भिडियोमा) - Khabar Nepali
पुष्पामा अल्लु अर्जुनको हातको इशारा शहनाज गिलबाट कपि गरिएको थियो ? प्रमाण हेर्नुहोस् (भिडियोमा)
फिल्म ‘पुष्पाः द राइज’बाट अल्लु अर्जुनको अहिले पनि देश विदेशमा चर्चा भइरहेको छ । यस फिल्ममा अल्लु अर्जुनको अभिनयदेखि लिएर उनको व्यवहार र शैलीलाई निकै रुचाइएको थियो । यसको पनि धेरै प्रशंसा भयो । ‘पुष्पा’ मा अल्लु अर्जुनको हातको इशारा देखेर फ्यान र दर्शक यति प्रभावित भए कि सबैले उनको नक्कल गर्न थाले । सोशल मिडियामा धेरै भिडियो प्रतिस्पर्धाहरू सुरु भए, जसमा प्रयोगकर्ताहरूले अल्लुको हातको इशाराहरू प्रतिलिपि गरे। तर के तपाईलाई थाहा छ अल्लु अर्जुनको हातको यो इशारा नयाँ होइन ।
शहनाजबाट हातको इशारा नक्कल ?
अहिले एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जसमा अल्लु अर्जुनको दाह्री मुनिबाट हातको इशारा गरेको भिडियो अरु कसैबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । बिग बोस १३ की प्रतियोगी रहेकी शहनाज गिलको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । यस भिडियोमा शहनाज गिल अल्लु अर्जुन जस्तै हातको इशारा गर्दै देख्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा अल्लुको स्टाइल शहनाजबाट प्रेरित भएको मानिन्छ ।
इन्स्टाग्राममा एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो भिडियोमा शहनाज गिल बिग बोसको घरमा उभिएकी छिन् । शहनाजको अगाडि कोही बसिरहेकी छिन् र उनी आफ्नो चिउँडोमुनि हात हल्लाइरहेकी छिन् । भिडियो हेरेर शहनाज गिलले सन् २०१९ मा पुष्पाको आगमन अघि अल्लु अर्जुनको हातको इशारा आविष्कार गरेको बताइन्छ । यो भिडियो पनि निकै भाइरल भइरहेको छ ।
शहनाज गिल बिग बोस १५ को फिनालेमा देखिएकी थिइन् । शहनाजले यहाँ होस्ट सलमान खानसँग धेरै रमाइलो गरेकी थिइन् । दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्लालाई पनि सम्झिइन् । ‘पुष्पाः द राइज’को कुरा गर्दा अल्लु अर्जुन र रश्मिका मन्डन्नाले यसमा काम गरेका छन् । फिल्मले देश तथा विदेशमा राम्रो व्यापार गरेको थियो । योसँगै यसको निकै प्रशंसा पनि भइरहेको छ ।